Tattoos macnaheedu - Fikradaha Fikradaha Tattoos
Tattoos oo macne leh
Shimbiraha waxaa loo yaqaanaa xayawaan lacag la'aan ah taas oo ah sababta ay dad badani u galayaan. Waxay la xiriiri kartaa waxyaabo badan oo nolosha ah, taasina waa sababta aad u heli karto rag iyo dumar isticmaalaya. Qaar ka mid ah dadku waxay la wadaagaan shimbirta shimbiraha, xorriyadda, nabadda, jacaylka, aqoonta, caqliga caqliga, xarrago, quruxda, qoyska, hooyada, hanuunin ruuxi ah iyo waxyaabo kale oo badan.
Sawirrada shimbiraha waxaa loogu talagalay inay u eegaan qabow iyo aan caadi ahayn qaabeynta iyo qaabka. Tani waa mid ka mid ah sababaha ay dadku ugu doortaan qaabab kale oo tattoo ah. Waxaa jira noocyo kala duwan oo shimbir shimbir oo leh macno kala duwan. Adiga ayaa ah inaad go'aamiso nooca shimbirta ah ee aad u baahan tahay si aad ugu keydiso jirkaaga. Shimbiraha waxay ku yimaadaan qiyaaso iyo qaabab, mid kastana wuxuu leeyahay wax gaar ah oo ku saabsan. Dadka jecel inay tagaan xorriyadda ama dareenka lahaanshaha nolosha waxay u tegi karaan naqshadeynta tattoo gaar ah. Tartoo shimbiraha ayaa lagu qori karaa qayb kasta oo jirka ah iyada oo aan loo malaynin in lumay macnaha lumay iyo sidoo kale waxay sheegi kartaa waxyaabo badan oo ku saabsan qof.
Halkan riix halkan si aad u eegto fikradda ugu dambeysa ee shimbiraha ee ragga iyo dumarka.
Hinduism - Sida laga soo xigtay Hinduuga, mandala wuxuu macnaheedu noqon karaa fikir. Tani waa sababta oo ah waxaa loo isticmaalaa sidii diiradda oo waxay noqotey qalab ku saabsan ruuxa.
Talaashka Mandala waxa uu noqday dad badan oo isticmaalaya inay matalaan waxyaabo badan oo noloshooda ah, sida jilicsanaanta. Tattoo waxaa loo isticmaali karaa in la sameeyo bayaanno badan oo aad si dhab ah u aqoonsan karto haddii aad tahay lover of tattoo wanaagsan oo doonaya fikrad.
Halkan riix halkan si aad u eegto fikradda naqshadeynta ee ugu dambeysay ee mandala ah ee ragga iyo dumarka.
Tawanka Dove wuxuu noqday calaamad muujinaysa jacayl, nabad iyo cibaado. Waa xuruuf xuruuf ah oo loogu talagalay masiixiga waxayna caan ku noqotay sanadihii la soo dhaafay. Tawanka qoolleyda ayaa soo gaadhay inuu nala joogo, sababtoo ah faai'dadiisa. Dad badan ayaa kufaraxaya quruxda la socota tattoo. Waxaa jira macnooyin badan oo la xiriira kicidda. Waxay mataleysaa bacriminta, dheddigga iyo weliba quruxda.
Tawanka qashinka ee macnaheedu waa wax aad muhiim u ah aduunka. Waxaa loo isticmaalaa sidii tattoo loo dulqaadan lahaa. Waxay u taagan tahay xasiloonida iyo joogtaynta. Tafooofka qoolleyda waxaa loogu talagalay inay noqoto mid qurux badan. Qoollada cadcad waxay ka dhigan tahay nadiif iyo daahir la'aan. Wax yar baa la yaabay gabdhaha yaryar ee gabdhaha yaryar iyaga oo ku dhex jira astaamahooda koowaad sida calaamad daahir iyo daryeel. Dadku waxay ku dari karaan sawirro kale oo ay weheliyaan qoollada oo ay ku jiraan isticmaalka farriimaha si ay u sheegaan macnaha kaladuwan ee tafaariiqda qashin qubka.
Halkan riix halkan si aad u eegto fikrada naqshadeynta dove-ka cusub ee ragga iyo dumarka.
Tattoo moon wuxuu noqday mid caan ah oo caan ka ah sababtoo ah waxa ay mataleyso. Qaar badan oo ka mid ah dadka ku dhejiya waxay aaminsan yihiin in ay saameyn ku yeelato awoodda sarraysa iyo sidoo kale asal ahaan, waxay muujinaysaa taariikhda iyo sayniska. Dadka isticmaala tattoo-ta waxaa laga yaabaa inaanay xiiseynin macnaha kor ku xusan sababtoo ah tattoo dayaxa waxay leedahay macno badan. Tirada macnaha mugdiga ayaa ah waxa ka dhigaya mid aan caadi ahayn. Waxaa lagu dhejin karaa sawirro kale si ay kuugu siiyaan macnaha waxtarka leh. Qaar ka mid ah macnaha mugdiga ayaa noqon kara sixir. Kuwa aaminsan sixirku waxay ku dhejin karaan tattoo qaybo ka mid ah jirkooda. Dabeecadda ba'an ee dayaxa waa wax dadka ka dhigaya inay ku dhejiyaan jidhkooda inta ay yihiin kuwa iyagu sheegay in ay matalayaan cibaadada iyo cibaadada.
Halkan riix halkan si aad u eegto fikrada naqshadaynta ee bisha cusub ee loogu talagalay ragga iyo dumarka.
Naqshadeynta tattoo fiiqan waa mid la yaab leh oo ah sababta ay dadku ugu leeyihiin qaybo kala duwan oo jirkooda ah. Tattoo waa mid adag oo tani waa sidoo kale sida ay u mataleyso waxyaabo kala duwan. Shakhsi ahaan ama khiyaanada qarsoodiga ah ee qotada dheeraadka ah waa waxa ku daraya dabeecadaha qoriga. Sifooyinka qadiimiga ah ayaa sheegaya in 8 ay tahay tiro nambaro badan oo nolosha ah. Tani waa sababaha abuuray sideed lugood waxaa loo tixgeliyaa inay yihiin awood. Octopus wuxuu ku dhex jiraa qaybtaan oo ah xayawaanka mugdiga ah. Tattoo macnaheedu waxa weeye iyada oo ka imanaysa awoodda addimada si ay dib ugu soo noqoto. Tattoo wuxuu noqon karaa dib-u-kicinta iyo dib-u-nooleynta.
Dad badan ayaa isticmaala si ay u rumaystaan ​​in daboolkooda la tirtiri karo. Tattoo octopus ayaa sidoo kale macnaheedu yahay in ay rajo ka qabaan mustaqbalka. Awoodda qotada dheeraadka ah ee waxtarka badan leh ee adduunkoodu waa waxa dadka ka dhigaya in ay aaminsan yihiin in abuurku yahay mid isku dhafan. Waxay caddaynaysaa in tattoo loo yaqaan 'tctoo octopus' loogu talagalay kuwa u baahan in dib loo furo. Tattoo waxaa loola jeedaa si cajiib ah, qurux badan iyo tiro yar. Naqshadeynta joornaalku waa sidoo kale waxa ka dhigaya inay dadka ka istaagaan sababtoo ah awoodda ay u leeyihiin inay abuuraan taageero.
Tattoo Tiger waa midka ugu caansan gaar ahaan kuwa Asiya. Macnaha mugdiga waa waxa ka dhigaya mid aad u fiican. Tattoo of a shim waa waxa muujinaya habka ninku nool yahay iyada oo aan wax xaddidan. Waxay matalaan nacasnimo, gardarro, xoog iyo awood. Waxaa loo yiraahdaa inay yihiin qoraxda qorraxda sababtoo ah waxaa la aaminsan yahay in ay xukumaan awoodaha awooda.
Dadka u tagaan tattoo qaboojinta maaha kuwo xakameynaya xushmadda, sababtoo ah waxay aaminsan yihiin dareenkooda. Lovers duujintan tattoo si aad u muujiso sida ay awood ugu noqon karaan. Tiger ayaa la aaminsan yahay inuu yahay ilaaliyeyaasha kuwa dhintay. Tani waa sababaha badanaa lagu arki karo qabuuraha ama xabaalaha.
Halkan riix halkan si aad u eegto fikrada naqshadeynta jimicsiga cusub ee ragga iyo dumarka.
Tattoo Dreamcatcher wuxuu caan ku yahay dadka ka soo jeeda Maraykanka. Naqshada tattoo waxay calaamad u tahay hidaha dhaqanka hodanka ah ee dadka. Tattoo-ka riyadu wuxuu ka caawiyaa qaadista tamarta xun iyo tan xun. Dadka raba inay ka caroodaan riyootiga xun ama riyo qarxa waxay isticmaalaan tattoo-riyoonaha riyadu. Kuwa khatarta tattoo waxay awoodaan inay seexdaan si nabad ah oo farxad leh. Haddii aad qorsheyneysid inaad samayso naqshad tafaariiq ah oo qaas ah oo sheegi doonta sheekooyin badan iyada oo mataleysa nolosheeda ayaa isticmaali karta tattoo riyootiga ah.
Halkan riix si aad u eegto fikradda naqshadeynta sawirada riwaayadaha ugu dambeeyay ragga iyo dumarka.
Macnaha Eegle Tattoo Designs waa wax aad jeceshahay inaad ogaato. Waxaa jira macnooyin badan oo la yimaada tattoo. Gorgortadu waa shimbir lagu sharfay adduunka oo dhan, waxaana ku xiran wanaag. Waxay macnaheedu noqon kartaa awood, fursad, xikmad, xorriyad, isuqraadin iyo roonaan, awood, xukun, fursad, ilaahyo ilaahyo iyo ruuxi ah. Taas macnaheedu waa waxyaabo badan oo awood badan. Naqshadeynta ayaa ka dhigaysa mid gaar ah iyada oo saameyn ku yeeshay dareenkooda. Waxaa jira kala duwanaansho kala duwan oo gorgor ah oo la yimaada macnahoodu.
Baalasha baalasha ayaa ka hadlaya xorriyadda iyo ilaalinta. Haddii aad raadineyso xorriyad, mid ka mid ah qalabka wax lagu dhigo ee aad u tegi karto waa tattoo baakada. Ilaalinta ay bixiso waa sababta dad badan ay u isticmaalaan si ay u ilaaliyaan sharka. Sawir-qaadashada tattoo-ga xajka ah waxaa loo sameeyaa qaab sidan oo macnaheedu yahay si buuxda u muuqata. Tani waa sababta ay caan u tahay iyo sidoo kale naadir. Kalluunka shimbirta waa wax la qiimeeyo aduunka oo dhan. Haddii aad rabto in aad haysato matalaad weyn oo weyn oo ku xiran jirkaaga, tattoo eagle ah waa wax ka dhigi doona wakiilkan.
Halkan riix halkan si aad u eegto fikrada naqshadeynta jaceylka ugu dambeeya ee ragga iyo dumarka.
Tattoo indhaha waa ay ku badan tahay dhaqamada kala duwan waxayna sidoo kale ka duwan tahay Masiixiyiin dhaqanka Masaarida. Indhuhu wuxuu kaa caawinayaa inaad ku muujisid calaamadda, ilaalinta ama cad. Qaarkood ayaa laga yaabaa inay isticmaalaan si ay u matalaan dareenka. Uma baahna nooca ujeedada aad leedahay, tattoo isha waa wax kaa caawin kara matalaaddaada. Xitaa haddii aad tahay mucaarad, indhaha ayaad qarisay. Qofna kuma matalayo tattoo indhaha iyo haddii aad ku faraxsan tahay hab nololeedka dhalmada, aadan ku sameyn karin tattoo isha.
Indhaha noocyada kala duwan waxay u taagan yihiin waxyaabo kala duwan. Tusaale ahaan indhaha horeba iyo kuwa kaleba, waxay leeyihiin macnaha tattoo oo muhiim u ah qofka xiran. Tattoo indhaha waa qurux badan, sidoo kale wuxuu ka sheekeynayaa kor u qaadka mustaqbalka. Indhaha ayaa noqotey naqshad tattoo ah oo dadka ka dhigaysa inay ku farxaan noloshooda. Dhammaan muuqaalka dabeecadaha ee ilaahyada ayaa sidoo kale laga arki karaa indhaha.
Halkan riix halkan si aad u eegto fikrada naqshadeynta ee ugu dambeeyay ee ragga iyo dumarka.
Tattoo ubaxa waa mid caan ah waxayna sidoo kale caan ku tahay dhaqamada kala duwan ee adduunka. Dhaqan ahaan, tattoo ubax badanaa waa haweenka. Quruxda ubaxa waxay ka dhigan tahay waxyaabo badan oo ku xiran ubaxa loo isticmaalo. Ubaxa ubaxa waxay leedahay macnaheedu waa sida ubaxyada kale waxay leeyihiin macnahooda. Tattoo ubaxa jilicsan ayaa ka mid ah kuwa ugu caansan waxayna leedahay macne muhiim ah. Ubaxa wuxuu matalaa dareenka, dhalida, dhalashada, taageerada, riyadiisa, sixirkiisa, qadarinta, daryeelka iyo jacaylka. Macnaha ubaxa waa in la sameeyaa farriinta in dharka uu rabo in uu u gudbo inta kale.
Tattoo dhirta macnaha lama tirtiri karo sababta oo ah calaamadaha ay leedahay. Dadku waxay hadda ku darayaan saamayn cajiib ah iyaga oo soo qaadaya qalabka kale ama waxyaabaha kale si ay u siiyaan fariin khaas ah oo gaar ah oo kaliya loogu talagalay iyaga. Ubax kasta oo ka soo baxa ubaxa ilaa ubax ayaa leh macnaheedu. Adiga ayaa ah kan go'aan ka gaari doona nooca farriinta aad rabto inaad ka gudubto. Macnaha dhirirka dhirta waa mid ka mid ah kuwa ugu wanaagsan sababtoo ah macnaha weyn iyo calaamadaha ay wadaagaan dunida oo dhan. Marka ubax lagu daro erayada, midabada iyo waxyaabaha, waxay muujiyaan macne weyn.
Halkan riix si aad u ogaato fikradda naqshadeynta ubaxyada ugu dambeeya ee ragga iyo dumarka.
Taabashadu waxay ka dhigan tahay wax badan oo aad ka fekeri karto. Waxay leedahay naqshad gaar ah oo la mid ah motif. Waa maxay wadahadalka naqshadeynta waa mid joogto ah oo sax ah. Qaabku wuxuu leeyahay waxyaabo badan oo lagu sameeyo xisaabta waxana uu had iyo jeer ahaa tattoo ah in dad badani isticmaalaan si ay u matalaan qiyaasta, dheelitirka iyo joogteynta. Waxay sidoo kale ka hadlaysaa saadaalinta sababtoo ah qaabka naqshaduhu waa.
Geometric Tattoo macnaheedu wuxuu noqon karaa macnaha isku dhafka iyo caadada. Wax kasta oo ku saabsan joomatari waxay tilmaamayaan jaangooynta iyo farxadda, iyo sidoo kale habka loo qoro waxay ka dhigeysaa nooc naadir ah oo tattoo ah. Furaha badiyaa dadku waxay kuxiran karaan tattoo. Joometeriga joometeriga ayaa noqda buundadaas in badan oo isticmaal ah oo lagu qiimeeyo waxa ay ku guuleysteen nolosha.
Hamsa Tattoo Macnaha
Hamsa tattoo macnaheedu waa mid weyn oo leh macnooyin kala duwan oo adduunka ah. Tattoo farsamo ahaan waxay ku jiraan qaababka iyo calaamadaha bixiya dareenka this dareenka. Shanta shaaha ee tattoogu waxay ka dhigan tahay dareenka aadanaha. Waxaa la aaminsan yahay in taatufada hamsa calaamad u tahay kalsoonida, ilaalinta, daganaanta iyo geesinimada. Waxaa jira laba siyaabood oo loo dhisi karo taatuuga hamsa. Ugu horreyn, waxaa loo isticmaali karaa in lagu hayo waxyaabo xun ama wax xun. Waxyaabaha xiga waxa weeye in loo isticmaalo nasiib wacan.
Xamma Hamsa waxaa loo qaabeyn karaa siyaabo badan sida marka isha loo isticmaalo, waxaa loo isticmaali karaa ilaalinta; indhaha Horus. Waxaa la rumeeysan yahay in indhahani ay ilaalin karaan dadka oo xitaa riixaan sharka. Islaamka, taatuuga Hamsa waxaa loo isticmaali karaa in laga hadlo shan calaamadood oo Islaami ah. Taasina waa sababta loo yaqaan "Fatima". Gacanta Fatima waxay u taagan tahay Fatima Zahra. Fatima, gabadhii Muhammad.
In diinta Yuhuudda, waxay u taagan tahay shan dareen oo salaadooda ah iyo sidoo kale buugaagta 5 ee Torah. Hamsa tattoo macnaheedu waa wax dhaqammo badani u adeegsan jireen qadarinta qaar ka mid ah caqiidooyinka iyo fikradaha. Waxay ka dhigan tahay in ka badan sidan.
Halkan riix halkan si aad u eegto fikradda ugu dambeysa ee hamsa tattoos haweenka.
Tattoo scorpion macnaheedu waa wax badan oo ka yimaada dadka meelo kala duwan oo adduunka ah. Tattoo waa mid calaamad u ah oo ku saleysan inta badan habdhaqanka abuurka. Waxay u wakiilan kartaa dabeecadda iyo jinsiga labka ah ee labka ah sababtoo ah nooca qoob-ka-ciyaarka ah ee uu ka dhigayo inta lagu jiro maadada. Waxaa loo isticmaalaa in qalliin lagu sameeyo Mayansiyaanka iyo taraafikada waxaa loo adeegsadaa diimo kala duwan si ay u noqdaan waxyaabo kala duwan, badanaaba la xidhiidha sharka. Waxaa loo isticmaali karaa macneheedu tahay ilaalin iyo sidoo kale matalaya dagaal.
Qaar badan oo ka mid ah dadka ka badbaaday cudurka kansarka ayaa isticmaala tattoo si ay u sheegaan sheekada socdaalkooda kansarka. Dagaalayaasha ama xitaa sanduuqyada waxaa badanaa lagu arkaa inay isticmaalaan tattoo si ay u tusaan cidda ay yihiin. Tattoo scorpion micnaheedu waa iska caabin iyo caqabado qaar marka qaarkood ay u qaadaan si ay u noqdaan kuwo xasaasi ah, sharaf leh oo daacad ah oo daacad ah. Tattoo sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa in laga hadlo dareenka, adkeysiga, dagaalka, dulqaad, ilaalinta, dulqaad, difaac, dhimasho, daacadnimo iyo shar.
Adiga ayaa go'aan ka gaara waxa aad rabto in shaashadda duufantaada ee macnaheedu yahay. Waxaa jira noocyo kala duwan oo ah qaababka sawir-celinta ee taraafiga ah oo aad kala dooran kartid oo mid walbana wuxuu leeyahay macnahooda. Si kastaba ha ahaatee, waxaad si toos ah u siin kartaa tattoo-gaaga si aad uga dhigto wax ka duwan.
Halkan riix halkan si aad u eegto fikradda naqshadeynta sawirrada ee ugu dambeeyay ee ragga iyo dumarka.
Macnaha Tattoos macneheedu waxay ku kala duwan yihiin meel kale. Waxaa jira noocyo kala duwan oo ah kabo, waxayna leeyihiin macnahooda. Fikradda ah in dhakhtarku micnaheedu yahay dhimashada dad badan oo badan ayaa laga yaabaa inayan run ahayn gaar ahaan marka la keeno ilbiriq badan oo indhaha ah. Qalabka ayaa loo qaadi karaa siyaabo badan oo ay ku dhamaato macnaha weyn ee aad jeclaan lahayd. Tattoo skull wuxuu noqon karaa xusuusin qof geeriyoodey iyo sidoo kale in aan dhamaanteen noloshaan ku noolaaneyno si buuxda.
Noocyada dhakada ayaa sidoo kale leh macnahoodu sida taatuusha caan ah ee loo yaqaan 'plaque skull' kaas oo badanaa loo yaqaan 'tattoo skull' ama 'tattoo'. Tusaale ahaan dadka reer miyiga ah waxay jecel yihiin Maalinta Dhimashada Dhimashada sababtoo ah kaalinta ay meeluhu ka taagan tahay.
Dumarka isticmaalaya shaati-tuubooyinkaas waxay badanaa ku sameeyaan midab wacan si ay u siiyaan macnaha dheeraadka ah. Waxaa jira dad ku dhajiya khadka dhererka leh gaar ahaan burcadbadeedda, tattoo waxaa ku jira micno badan marka loo eego qofku sawir ahaan.
Dumarku waxay inta badan isticmaalaan midabada si ay u bedelaan habka ay dadku u arkaan tattoo iyo micnaha macnaheedu waa mid aad u fiican.
Halkan riix halkan si aad u eegto fikradda ugu dambeysay ee dharka naqshadda jimicsiga ee ragga iyo dumarka.
Macnaha qorraxda iyo dayaxa Tattoos waa wax aad ogtahay marka aad u socoto qalinkaas. Fikradda tattoo ee qorraxda iyo dayaxa waxay leedahay qaabab iyo naqshado badan oo qof kasta oo xikmadaysan u isticmaali karo. Qaabka dayaxa iyo qorraxda waxay ka wada hadlaan wareegga nolosha ee aan dhammaadka lahayn. Marka qorraxda iyo dayaxa la dhigo gudaha wareega, macnaha waxaa laga yaabaa inuu ka duwan yahay.
Ka hadlida tattoo qorraxda, waxay u taagan tahay awood, awood iyo dib-u-dhalasho halka tattoo dayaxa ay muujin karto nolosha dumarka ah ee nolosha dhaqamada qaarkood marka ay timaado godad. Marka qorraxda iyo dayaxuna ay midabeysan yihiin, macnaha ay kujirto waxay ku xiran tahay midabada aad dooratay. Qorraxda badanaa waxay muujinaysaa nafta nolosheeda waxaa lagu dari karaa bisha si ay u muujiso Yin Yang. Xidhiidhka dumarka iyo ragga ayaa si buuxda u calaamadeynaya qorraxda iyo tattoo moon.
Qorraxda iyo dayaxu waxay ka hadli kartaa rabitaanka ragga ee jecel. Tani waa sababta isku-dhafka ah ee jidhka laba darajeedku ay noqdeen nashqad tafaariiqeed oo cajiib ah oo loo isticmaali karo qof kasta. Naqshadeynta tattoo kasta waa la qaabeyn karaa.
Halkan riix halkan si aad u eegto fikradaha naqshadaynta iyo qoraxda ee loogu talagalay raga iyo haweenka.
Qorraxda Sunta ah waxay mar walba caan ku ahayd xitaa inta lagu jiro waqtiyadii hore. Dabeecadda caanka ah ee qorraxda waa waxa u soo jiidata ragga iyo dumarka. Muhiimadda qorraxda waxay noqon kartaa mid xun ama mid wanaagsan, tani waxay ku xiran tahay dhaqanka meesha uu qofku ka yimid. Wax qarsoodi ah ma aha in nolosha aan la joogi karin iyada oo aan qorraxda. Qorraxdu waxay noqon kartaa nolol, awood, tamar, jacayl iyo taageero nolosha. Waxa kale oo macnaheedu noqon karaa dib-u-dhalashada iyo diimaha qaarkood waxay leeyihiin macne gaar ah oo ku saabsan qorraxda. Waxaa jira siyaabo kala duwan oo loo sawirayo qorraxda qorraxda iyo waxa ay macno u leeyihiin. Qorraxdu soo baxday waxay macnaheedu noqon kartaa awoodda Ilaah iyo jiritaanka weyn. Dad badan ayaa isticmaala qorraxda si ay u ekaadaan sida qoraxda dabiiciga ah ee dabiiciga ah ee taageeraha isboortiga intiisa badan isticmaala.
Macnaha qorraxda qorraxda waa sababta dadka doonaya inay muujiyaan awoodooda iyo maskaxdooda gudaha ah inta badan u tagaan. Qorraxdu waxay ku soo baxdaa midabyo kala duwan sida midabka midabka leh oo leh macnayaal gaar ah. Qaabka qoraxda ayaa sidoo kale leh macnooyin badan oo ku saabsan dhaqanka in tattoo uu ka yimaado. Sawirada qorraxdu waa mid aad u fiican oo aad u fiican.
Halkan riix halkan si aad u eegto fikrada naqshadeynta quruxda badan ee ragga iyo dumarka.
Tattoo geedku wuxuu calaamad u yahay waayo-aragnimo culus iyo waaya-aragnimo dheer. Dhirta ayaa had iyo jeer joogaan wakhti dheer waxayna ku qaataan sanadaha 500 ee dhulka, jiilka soo baxa ee ninka. Tani waa sababta geedaha loo qoro si ay u muujiyaan nolol dheer iyo bogsoon. Awoodda geedka iyo isbarbardhigga xaalad kasta waa waxa ay ku dheehan tahay dad badan. Qof kasta ayaa ku dhejin kara jirkiisa jirka. Geedka wuxuu ku siin karaa guryo iyo nabadgelyo badan oo xayawaan ah. Badbaadada ay u keento dadka kale waa wax cajiib ah. Kuwa raadinaya amniga noloshooda waxay awoodi karaan inay u adeegsadaan asluubtooda. Waa noocyo badan oo geedo leh macno kala duwan iyo muhiimada.
Geedka waxaa sidoo kale loo adeegsadaa qaar ka mid ah dhaqamada diinta sababtoo ah muhiimada ay tahay inuu ciyaarayo. Iyada oo tirada geedaha ee la heli karo iyo ficil ahaan astaamaha ay u taagan tahay, qof kastaa wuu isticmaali karaa. Waxaad u isticmaali kartaa geedka kuugu dhow ee dhaqankaaga si aad uga dhigto qaar ka mid ah astaamaha geeska ah ee jirkaada. Xaaladda astaamaha ee geedka waxay macno badan ku sameyn kartaa adoo habeynaya dhirtaada tattoo jirkaada iyadoo ku xiran fariinta aad rabto inaad ka gudubto.
Halkan riix halkan si aad u eegto fikrada naqshadaha dhirta ugu dambeeya ee ragga iyo dumarka.
Tattoo-taajka waa mid gaar ah sababtoo ah macnaheedu waa awoodda iyo awoodda Boqortooyada. Taajka waxaa loo isticmaalaa waxyaabo badan. Kuwa ka mid ah guryaha boqortooyadu waxay si fudud u aqoonsadaan tattoo taajka ah, maxaa yeelay waxay ku dhowdahay qalbiyadooda. Ma jiraan meelo adduunka ah in taajku uusan haysanin muhiimaddiisa. Matalaadda tattoo taajuulka waa wax aan xitaa haweenku ku kici karin.
Halkan riix halkan si aad u eegto fikrada naqshadda dharka cusub ee ragga iyo dumarka.
Suufiyuutarada diamondku waa sawirada la aqoonsan yahay oo la xidhiidha quruxda iyo hantida. Tilmaamahaan waxaa lagu arkaa meelo badan oo jidhka ka mid ah waxayna sidoo kale loo isticmaalaa sida qurxinta. Tattoo dheeman ayaa loo isticmaali karaa in laga hadlo ku-dabacsanaan. Tani waa sawir saxda ah in tattoo bixinta sababtoo ah lama baabi'in karo.
Halkan riix halkan si aad u eegto fikrada naqshadeynta dheemman ee dharka cusub ee ragga iyo dumarka.
Tattoo ayaa loo habeyn karaa in uu noqdo waxyaabo badan oo nolosha sida nolosha, saaxiibtinimada ama xitaa jacaylka. Tattoo wuxuu u taagan yahay wadnaha iyo xitaa xiddigaha. Tattoo boobka ayaa sidoo kale waa wax aad u baahan tahay inaad isticmaasho baabuur wadid fariin xooggan oo dadka u raba.
Qofna ma fiicna marka ay timaado tattoo infinity. Sida loola socdo iyo matalaadda falanqaynta xisaabeed ee uu ka hadlayo. Tattoo infinity wuxuu noqday nooc fariin gaar ah oo xitaa ragga ay jecel yihiin in ay u sheegaan asxaabtooda inay go'aansadeen in ay ka wanaagsanaadaan sidii hore. Tattoo infinity waxaa laga helaa qaabab kala duwan iyo cabbirro kala duwan. Macnaha waa la sii kordhin karaa marka la isku daro waxyaabo kale si ay u noqoto mid gaar ah oo ka sii fiican.
Halkan riix halkan si aad u eegto fikrada naqshadeynta bini-aadannimada ugu dambeeyay ee ragga iyo dumarka.
Tilmaamaha Samurai ayaa ka dhigtay mid u fiican dadka inay matalaan cabsidooda iyo cabsigelintooda. Waxay calaamad u yihiin awood iyo awood. Tattoo wuxuu noqon karaa ragga, ragga way jecel yihiin in ay u adeegsadaan inay ku guuleystaan ​​dagaalka iyo sidoo kale dhimasho. Tuulada Samurai waxay ka hadlaysaa shakhsiyadda qofka xiran. Tattoo-gu wuxuu kaloo noqon karaa mid dumar ah oo si gaar ah loogu qaato wadnaha. Macnaha Samurai wuxuu u socon karaa wakhti dheer inuu u sheego sheekooyinka kale ee aadan awoodin inaad sheegto.
Halkan riix si aad u eegto fikrada naqshadaynta samurai ee dharka cusub ee ragga.
Tattoo qorraxdu waxay ka dhigan tahay waxyaabo badan. Ubaxa waxaa loo yaqaan dhismaha wuxuuna noqon karaa xagaaga kuwa jecel cadceedda, calaamadda xagaaga ama xitaa qashinka. Waa ubax loogu talagalay qorraxda waxayna noqotey mid calaamad u ah horumarinta nolosha. Waxaa loo isticmaali karaa sida taajka, mar walbana waa la qori karaa qorraxda. Dadku waxay u qaataan calaamad muujinaysa daacadnimo, farxad, abuur, diirranaan iyo dhalaalid.
Talaashka qorraxdu waxay ku jiri kartaa qaabab badan iyo qiyaaso badan, kuwaana waxay leeyihiin macnahooda. Waxaad tahay mid ka dhigan kara qorraxdaada socodka qorraxda ee muhiimka u ah qoto dheer oo laga yaabo inay ka fekeraan. Dadka qaarkood waxay ku daraan shay iyo xitaa farriimo taas oo ah tattoo-macnaheeduna waxay noqon kartaa. Dhaqamo badan ayaa sidoo kale leh macnaha gaarka ah ee ku saabsan gabbaldayaha. Tattoo wuxuu noqday mid ka mid ah kuwa ugu cad cad kuwa doonaya inay kiiskooda ku muujiyaan hab diirran. Iftiinka noloshu waxa uu ku faraxsan yahay in uu ku muujiyo jiritaanka meelo kala duwan. Qayb kasta oo jirka ah ayaa loo isticmaali karaa macnaha macmiilka.
Halkan riix halkan si aad u fiiriso fikraddii ugu dambaysay ee quruxda badhaxa qurxinta ee haweenka.
Cuntada jilitaanka ee Henna
Taraawinta Henna waxaa loola jeedaa wax aad u muhiim ah dadka xiran. Waa quruxdii hore ee jirka oo leh macno badan. Waxaa loo isticmaalaa in lagu muujiyo farxad, nasiib iyo sidoo kale calaamad u noqon karta dagaalka, dhalashada, barakooyinka iyo guurka. Tattoo-henna waxaa loo isticmaalaa in laga hadlo wax ku ool ah iyo xamaasad. Sameynta isticmaalka caleemaha waa wax kuu keeni kara xiriirka ruuxiga ah oo leh dareenka la yaabka leh ee lagu dabaqayo.
Qayb kasta oo jirka ka mid ah oo caanaha la dhigo waxay leedahay muhiimada iyo macnaha gaarka ah. Waxaa lagu dhejin karaa calaacalaha dharka si ay uga hadlaan barakooyinka iyo marka la geliyo gacanta, waxay ka hadlaysaa badbaadinta sidoo kale gaashaan ayaa sidoo kale lagu daraa.
Talaashka Henna waa hal tattoo oo ay dadku u isticmaalaan si ay u eegaan mid ka baxsan sababtoo ah muhiimada ay u leedahay qofka xiran. Waxaa jira waxyaabo lagu dari karo iyaga si ay u sheegaan macnaha gaarka ah ama sheeko gaar ah. Cagaaradu waxay awood u leedahay qaabka iyo macnaha. Waad ka bixi kartaa dadka badan markaad isticmaasho tattoo jilicsan si aad u noqotid bayaanka geesinimada ah ee aad marwalba dooneysay inaad dunida u sheegto oo aadan awoodin inaad sidaa sameysid.
Halkan riix halkan si aad u eegto fikradda naqshadaynta sawirrada ee ugu dambeeyay ee ragga iyo dumarka.
Macnaha macnaha dhadhanka macmacaanka wuxuu macnaheedu noqon karaa waxyaabo badan. Qofka xidhan waa qofka go'aaminaya waxa la samaynayo tattoo fartiisa. Bannaanku wuxuu calaamad u yahay sifooyin badan, kuwaas oo ay ka mid yihiin nasiib, barwaaqo, awooda dumarka, sirta, qarsoodiga iyo xidhiidhka ilaahnimada, ruuxa, dib-u-dhalashada, isku-xirka kaddib, ilaalinta, dareenka, sirdoonka, farsamada, xarrago, iyo maqnaanshaha.
Bisaga waxaa loo isticmaalaa in laga hadlo xornimada nolosha. Dad badan oo ku fikiraya inay tagaan wax khibrad iyo khaas ah ayaa u tegi kara talefoonka dharka. Macnaha waa mid muhiim ah oo cajiib ah si aad u fahamto. Sawirada dhadhanka waxaa lagu daraa waxyaabo kale si loo hubiyo in ay leeyihiin macnooyin kala duwan oo laga yaabo inaad horay u moodeen. Muxuu yahay tattoo xayawaanku wuxuu noqon karaa mid dareen ah, taas oo ah sababaha badan ee dumarka u tagaan. Dareenka la socdo waa mid aan la qeexi karin oo uu leeyahay muhiimadda dib-u-dhalashada in dadka intooda badani rabi doonaan inay soo dhawaadaan dhammaadka maalinta.
Halkan riix halkan si aad u eegto fikradda naqshadeynta jimicsiga ugu dambeeyey ee ragga iyo dumarka.
Tattoo macnaheedu yahay Tattoo
Tattoo isweydaarsi macnaheedu waa waxyaabo badan oo dad badan. Tani waxay matali kartaa waxyaalahan soo socda, Ururka Shaqaalaha, Diinta, Maskaxda, Xanuunka jacaylka ama lumitaanka, Nabadgelyo, Nabadgelyo, Xoog, Kuujin, diinta masiixiga / Kiristaanka, Nolol, Sun / Sun-caabud, Sinnaan, Dhimasho, Dhimasho , Dhaqanka Gothic, Dhaqanka, Haweeneyda, Dedication, Isbahaysiga, Sharaf, Masruufka, Dhaqanka / Dhaqanka Qoyska iyo Xusuusta qof la jecel yahay. Tattoo iskutallaabtu waa mid aad u caan ah waxayna leedahay shakhsi, qoto dheer, dhaqan iyo muhiimad taariikhi ah oo la qaabeyn karo.
Raga iyo haweenka waxay isticmaalaan tattoo sababo badan sababtoo ah balaayada macneheedu yahay in tattoo la yimaado. Dadka intooda badan waxay u habeeyaan inay si weyn u eegaan, adigana waa inaad go'aan ka gaartaa waxa aad rabto in iskutallaabtaada macnaheedu yahay. Ugu dambeyntii, waa waxa aad samaynayso iskutallaabtaada inay kuu noqon doonto. Tattoo iskugu dari kartaa waxyaabo badan iyo xitaa farriimo si aad u bedesho sida ay u egtahay. Tusaale ahaan, iskutallaabta ku jirta qaabab kala duwan iyo cabbirro kala duwan. Ma jiro qayb ka mid ah jirka oo aysan ku habboonayn. Maxay tahay micnaha tattoo iskutallaabta? Dad badan ayaa leh macno kala duwan. Aad ayey muhiim u tahay inaad ogaatid waxa aad ku jirtid jidhkaaga.
Halkan riix halkan si aad u eegto fikrada naqshadeynta sawirrada cusub ee ragga iyo dumarka.
Halkan riix halkan si aad u ogaato maalinta ugu dambeysa ee fikradda naqshadeynta laysku qurxiyo ee ragga iyo dumarka.
Tattoo wadnaha macnaheedu waa sharaf, xaraarad iyo jacayl. Waxaa jira macnooyin kale oo wadnaha ah iyo macnahan waxay ka yimaadaan habka ay matalayaan. Sida wadnaha wadnaha loo qaado waxaa loola jeedaa waxyaabo badan oo ku xiran qofka xiran. Midabada, qaababka iyo cabbirka tattoo waa wax ka dhigaya mid cajiib ah. Waxaad u isticmaali kartaa sheekada sheekada jacaylka. Wadnaha ayaa sidoo kale waxaa isticmaala qaar ka mid ah dhaqamada diimeed sababtoo ah muhiimada ay tahay inuu ciyaarayo. Marka la eego tirada wadnaha ee la heli karo iyo ficil calaamad ah oo ay u taagan tahay, qof kastaa wuu isticmaali karaa. Waxaad isticmaali kartaa qalbi udhaca dhaqankaaga si aad uga dhigto qaar ka mid ah hadalada jirkaada ku jira.
Sawirada wadnaha waa qaar ka mid ah sawirada ugu fiican ee aad arki karto. Waa dhif iyo khaas. Ma aha qof walba oo aad ku aragto shaati-tikaasta. Marka aad raadineyso naqshad tattoo ah si aad u raadiso xorayntaada, tattoo tani waa mid ka mid ah inuu tago sababtoo ah quruxda iyo muhiimada. Tattoo Heart ma aha oo kaliya caan ah laakiin sidoo kale quruxsan si aad u aragto marka farriimaha lagu daray. Fadhiyada ayaa sidoo kale lagu daraa si sheeko u sheegto.
Halkan riix halkan si aad u eegto fikradaha naqshadeynta sawirada ee ragga iyo dumarka.
arrow TattooDhaqdhaqaaqawaxay jecel yihiin tattooslibto libaaxtattoo biyo ahtattoo dheemantattooshenna tattooTattoos Wadnahanaqshadeynta mehnditattoos eagleshimbir shimbirTartoo ubax badanTattoo Feathersawirada malaa'igtalammaanahatattoos qorraxdagadaal u laabokoi kalluunkatattoos qoortatattoo indhahasawirada gabdhahaJoomatari Tattoostattoos saaxiib saxa ahsawir gacmeedku dhaji tattooscalaamadaha calaamadaha ayaa calaamad u ahmuusikada muusikadatattoos qabaa'ilkatattoos taajkiijimicsiga bisadahawaxaa la dhajiyay tattoostattoos sleevetaraagada kubbaddatattoos iskutallaabtalaabto laabtaTilmaamta jaalaha ahfikradaha tattootattoos gacantaTattoo infinitysawirrada raggatattoo ah octopustattoos qosol lehtattoos moongaraacista gacmahatattoo maroodigatattoos ubaxshaatiinka shiidantattoo tilmaantattoos cagta